Thailand Tourist Visa Extensions Zvino Yakarambidzwa |
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Tairendi » Thailand Tourist Visa Extensions Zvino Yakarambidzwa
Nezuro raive zuva rekupedzisira revashanyi muThailand kunyorera yekuwedzera vhiza yemazuva makumi matanhatu yeCOVID-60
Zvaitarisirwa kuwedzerwa, asi Thai Immigration yakasimbisa Chitatu, Ndira 26 kuti mavhiza ekuwedzera zvichienderana nekuona kweCovid kwave kurambidzwa. Zvakadaro einogoneka vatorwa vakapinda muHumambo pamazuva makumi matanhatu vhiza yevashanyi, yakapihwa neThai diplomatic post kunze kwenyika, kana nemazuva makumi matatu ekuregererwa kwemavhiza akadhindwa panhandare yendege yeBangkok.
Vane mavhiza asiri emumigrant e chero mhando handichakwanisi kuwedzera kana kuvandudza kugara kwavo nekushandisa nzira yeCovid.
Vatorwa zvakadaro vanogona kuenderera mberi nekuwana mawedzero ekugara kana ivo akakodzera pasi pemitemo yevhiza iyoyo isiri-immigrant. Semuyenzaniso, vane mavhiza asiri ekubva kune dzimwe nyika anobva pamudyandigere vanogona kuramba vachiwana mawedzero epagore chero bedzi vaine magwaro anodiwa ekubhangi kana emuembassy semunguva yakapfuura.
The chikonzero kune mutemo mutsva une chekuita neCovid ndewekuti hungwaru hwakaunzwa makore maviri apfuura kuti uwedzere kugara kwe "vashanyi" vaive vabatwa nedenda. Vanhu vakabata mavhiza asiri ekubva kune dzimwe nyika havachanzi vari pazororo.
Vashanyi vasingakwanise kuwedzera kana kuvandudza mavhiza avo muThailand vanopihwa mazuva manomwe kuti vabve munyika. Iyo Covid yekuwedzera kune vachiri vanokodzera "vashanyi" varipo kusvika Kurume 7, 25
Patient Lateral Transfer Market inotarisirwa kusvika ...
Zvekurima Equipment Market Yazvino uye Yeramangwana...